Websaydhyada Gelinta Filimka Bilaashka ah (2020) - Saxiix Ma Jirto & Download - Madadaalo
Goobaha Bixinta Filimka Bilaashka ah (2020) Bilaash Saxeex & Soo Degsasho la'aan
Cinephile adiga oo kale ah ayaa doorbidaya inuu daawado filimada iyadoo la tixgelinayo xaddiga xaddidan. Xitaa mararka qaarkood, Cinephiles-ka dhalinyarada ah way ku adagtahay inay abaabulaan lacag kaash ah oo loogu qoro degel si ay u daawadaan filimada ay ugu jecel yihiin. Marka si loo nadiifiyo mushkiladahaas, waxaan soo aruurinnay magacyada websaydhka ugu fiican ee hoorinta filimka bilaashka ah.
Goobaha Bixinta Filimka Bilaashka ah - Daawashada Filimada Khadka Tooska ah
Liiska 'Filimada Bilaashka ah' ee khadka tooska ah waxaa lagu bixiyaa websaydhyada laga ilaaliyo nooc kasta oo faragelin dibadeed ah. Sidoo kale, bogagani waxay xaqiijinayaan rukhsadaha sharci ee isticmaalayaasha.
Crackle ayaa ugu sarreeya mudnaanteenna koowaad ee liistada bogagga ugu wanaagsan ee loogu daawashada filimada internetka si bilaash ah. Crackle waxaa iska leh Sony Pictures, sidaa darteed isticmaale ahaan waxaad ku raaxeysan kartaa filimo fara badan oo dherer ah, taxane taxane ah oo ugu dambeeyay iyo haddii aad diyaar u tahay inaad doorato 'Ogeysiisyada soo socda' ee ku saabsan xayeysiisyada soo socda, waxaad naftaada ka dhigi kartaa mid cusbooneysiin leh tiro badan macluumaadka la xiriira filimka. Crackle wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay daawadaan qaar ka mid ah filimada cajiibka ah ee cajiibka ah nooc kasta oo cabbirka kormeerahaaga iyo shaashaddaada laga heli karo.
Filimada ay isticmaaleyaashu ku daawan karaan Crackle:Xumaan degan, Maalinta Dhulka, Iceman, Kulamada dhow ee Nooca Saddexaad, Jasiiradda Shutter, Zodiac, Badbaadinta gaarka loo leeyahay Ryan, Boogeyman, Dadka Xun iyo kuwa kaloo badan. Marka waad ku hayn kartaa websaydhkan meesha ugu sareysa xulashadaada mudnaanta ah ee loogu talagalay xulashada bogagga qulqulka filimada bilaashka ah.
Crackle waa codsi taleefanka gacanta oo hufan.
Fursadaha ciyaaryahanka warbaahinta ku filan ee isticmaalayaasha.
Go'aan sare oo sare loo qaaday daawashada filimada.
Filimmada ugu sarreeya ee la qiimeeyo iyo kuwa ugu fiican ayaa laga heli karaa Crackle.
Isticmaalayaashu waxay la kulmaan xayaysiis ganacsi muddo dheer ah, taas oo loo arko inay tahay mid aan loo baahnayn.
Isticmaalayaasha ma awoodo inay kala soocaan filimada ku saleysan caan ahaanta.
Popcornflix waa websaydh kale oo daawashada filimada khadka tooska ah ee bilaashka ah ee bilaashka ah ee lagu qanciyo dhammaan filimka ugu dambeeyay iyo kan ugu dambeeyay. Hawlaha warbaahinta shaashadda ayaa leh bogag internet oo Popcornflix ah. Kani waa degel websaydh ah oo xaqiijinaya bakhaarada filimada adiga oo kale ah inaad ku raaxaysato noocyo badan oo daawashada filimada ah sida riwaayadaha, naxdinta, ficilka, jacaylka, iyo qoyska. Muuqaalka ugu gaarka ah ee degelkan ayaa ah inaadan u baahnayn inaad qaadatid culays kasta oo abuuraya xisaab-kaliya guji badhanka PLAY oo ku raaxeyso daawashada filimada ugu wanaagsan ee laga heli karo Popcornflix.
Shaashadda Warbaahinta 'Ventures' waxay bixisaa mid ka mid ah boggaga internetka ee filimaanta tooska ah ee bilaashka ah ee dadka, kuwaas oo jecel daawashada filimada waqtiga buuxa.
Waxaad ka beddeli kartaa GIF-yada shaashadda.
Filimka Buff's like waxaad ka bixin kartaa jawaab celin qaybaha gaarka ah ee filimka, inta aad ka ciyaareyso internetka.
Isticmaalayaasha adiga oo kale ah ayaa ku raaxeysan kara ciyaaryahanka ugu fiican ee fiidiyowga ah inta aad ku ciyaareyso filimada degelkan.
Ku habboon carruurta.
Looma marin karo cinwaanno si loogu soo bandhigo shaashadda.
Ciyaaryahan fiidiyoow ah oo badan oo la hagaajiyay oo la xoojiyay ayaa looga baahan yahay dadka isticmaala.
Yidio waa bogga internetka ee ugufiican filimada bilaashka ah ee siiya fursad aad u fudud oo adeegsadayaasha ah si ay ugu raaxaystaan ​​filimada ugu fiican internetka. Yidio si gaar ah ayaa loo tilmaami karaa 'Mashiinka Raadinta Filimka Bilaashka ah', wuxuu kaa caawinayaa inaad wax ka ogaato boggaga bilaashka ah ee lagu daawado filimada internetka.
Qiimeynta filimada Yidio waxaa lagu sameeyaa astaan ​​gaar ah sida R, G, iyo PG-13 iyo sidoo kale xagga noocyada. Marka waa maxay noocyada gaarka ah ee aad ka daawan karto Yidio ?? Madadaalo, Muusiko, Dano Gaar ah, Indie, Shaki, Qadiimiga, filimada reer galbeedka iyo documentaries iyo Filimada TV-ga.
Filimada aad ka daawan karto Yidio:Femme fatale, Buluug waa midabka ugu diirran, The Chase, Terminator, Saddexda, Dogateers, iyo Mas'uuliyiinta ukunta dahabiga ah.
Marka waxaa markhaati laga ahaa in Yidio, dhinac ka mid ah, Yidio uu ka kooban yahay adeegyo ballaaran oo loogu talagalay shineemooyinka adiga oo kale ah adoo siinaya fursad weyn filimada bilaashka ah. Laakiin dhinaca kale, Yidio wuxuu u oggolaanayaa tarjumaad xun oo loogu talagalay dadka isticmaala adoo siinaya qadar ku filan oo xiriirro been ah iyo kuwa aan toos ahayn.
Filimaanta ayaa dib loo eegay iyadoo lagu saleynayo dhibcaha yaanyo qurmay.
Kala soocida filimada waxaa lagu samayn karaa 'caan' iyo 'dhawaan lagu daray'.
Waxaad ku shaandheyn kartaa filimada ku saleysan qiimeynta MPAA.
Yidio wuxuu bixiyaa xulashada raadinta ugufiican filimada bilaashka ah.
Tiro kooban oo filim ah ayaa helay marin bilaash ah oo lagu daawado.
Yidio wuxuu ka kooban yahay xiriiro fara badan oo aan toos ahayn.
Tayada sawirku ma fiicna.
Fiidiyowyada waxaa hakad galiyay xayaysiisyada ganacsiga muddo dheer.
YouTube waxay heshay fiidiyoowyo fiidiyoow ah oo bilaash ah oo bilaash ah oo si fudud looga heli karo YouTube-ka Filimmada iyo Muujiyadaha YouTube kuma koobna oo keliya u fiirsashada isjiidka iyo fiidiyowyada la xiriira skateboard-ka eeyaha laakiin sidoo kale waxaa lagu sii wanaajiyey filimada aad ku daawan karto bilaash.
Si kastaba ha noqotee, dhibaatada ugu weyni waxay tahay inaadan ka heli doonin wax filimaan cusub qaybta YouTube-ka ee bilaashka ah ee filimaanta bilaashka ah. Filimada laga heli karo YouTube-ka waa kuwo gaboobay. Daraasaddeenii ugu dambeysay ee YouTube-ka, waxaan ku aragnay in filimo ay ka mid yihiin la waayey 411, A Street Cat oo loogu magac daray Bob, Salvation, Devils dabaylo, iyo qaar kaloo badan ayaa laga heli karaa YouTube.
YouTube guud ahaan waxaa loo tixgelin karaa inuu yahay habka ugu helitaanka badan uguna fudud ee lagu heli karo shabakadaha filimada bilaashka ah laakiin isla waqtigaas, wuxuu helay dib u dhacyo iyo qasaarooyin fara badan.
Waa laguu oggol yahay inaad ku soo gudbiso ra'yi-celintaada qaybta qaybta ka dib markaad filim bilaash ah ka daawatay YouTube-ka.
Waxaad ka heli doontaa si aad u aragto ugu wanaagsan ee lagu qiimeeyo filimada lacag la'aan ah ay isticmaala kala duwan.
Xitaa qaar ka mid ah dokumenteriyada iyo filimada bilaashka ah waxaa martigeliya YouTube lafteeda.
Filimadii ugu dambeeyay si joogto ah looma heli karo YouTube-ka.
Filimada bilaashka ah ma laha noocyada HD ee tayada muuqaalka.
Filimaanta waxaa hoos u dhigi kara qofkastoo soo galiyay asaga oo aan bixin macluumaad hore.
5. Filimada Snag
Filimaanta waxay heleen meel cusub oo ay ku kulmaan filimada ugu fiican ee bilaashka ah ee khadka tooska ah iyaga laftooda loo yaqaan Snagfilms. Snagfilms wuxuu kakoobanyahay in kabadan 2000 oo lagu daray filimo, dokumentaryo, iyo taxane web. Cinephiles wuxuu arki karaa tiro filimo ah oo ku filan oo ku saleysan xulashada tifaftiraha ugu fiican, noocyada isticmaalaha curate, iyo fursado kale oo badan oo kale oo ka dhigaya Snagfilms degel internet-ka ah oo fiidiyoow bilaash ah.
Snagfilms ayaa dhowaan cusbooneysiisay muuqaal-ururintooda filimka nooca cusub ee Snagfilms-na wuxuu ka kooban yahay filimo sida Mr. Kirismas, Alaabta carruurtu ku ciyaaraan waxay noqon doonaan alaabta lagu ciyaaro, Medea, Veterans, iyo Milatariga, ka hor intaanay Kirismaska ​​ahayn iyo filimo kale oo badan.
Snagfilms waxay bixisaa helitaanka bilaashka ah ee aragtida iyada oo aan lahayn nooc waqti go'an ah. Marka uma baahnid inaad ka walwasho bixinta nooc kasta oo khidmadaha isqorista ah waxaadna ku raaxeysan doontaa filim buuxa oo waqti buuxa aan lahayn nooc kasta oo carqalad ah.
Filimada Snag sidoo kale waxay bixiyaan filimo fiican oo waxbarid leh oo loogu talagalay carruurta waxayna u oggolaaneysaa shuruudaha dajinta bilaashka ah. Waxaad ka gali kartaa Snagfilms Facebook iyo Google iyo akoonada.
Hakadyada noocaas ah ee ku saabsan xayeysiinta ganacsiga.
La heli karo codsiyo iyo aalado badan.
Filimada si nidaamsan ayaa loogu qaabeeyey noocyo iyo uruurin kala duwan.
Cinwaanno cinwaan uma aha filimada.
Buffering-ka wuxuu qaadanayaa waqti dheeri ah iyadoo horay loo socdo.
Qiimeyn filim lama heli karo.
Dadku way ka yaryihiin waxqabadka muuqda ee Vudu ku ciyaarayo nolosha filimada. Waxaa jira in kabadan kun filim oo looqeexay qaybo kaladuwan Vudu. Vudu wuxuu ka kooban yahay filimo bilaash ah oo lagu taajiray 1080pixel, sidaa darteed dadka filimada qabatimay uma baahna inay wax u dhimaan tayada sawirka filimka, xitaa marka aad dooranaysid rukhsad bilaash ah.
Si aad u dooratid filimo bilaash ah oo ku saabsan websaydhka Vudu waxaad u baahan tahay inaad si toos ah ugu tagto bogga cusub ee Vudu si aad u daawato filimaan bilaash ah oo laga heli karo golahan. Waxaa jira tiro badan oo ah noocyo kuwaas oo si gaar ah loogu qoondeeyay Dambiga iyo Shakiga, Waxyoonimada iyo Iimaanka, Waxqabadka, Caruurta iyo Qoyska, Jacaylka, iyo Majaajillada.
Vudu gudaheeda, marka aad caadeysato daawashada filimka, waxaa lagaa codsan karaa inaad kireysato ama iibsato filimka. Si fudud waad iska indha tiri kartaa adigoo gujinaya badhanka bilaashka ah markasta oo sanduuqa wadahadalka bilaashka ah ama kirada ah uu ka muuqdo shaashadda. Haddii aad rabto inaad iska qorto Vudu ka dib dooro lacagta filimada oo sii soco.
Tirada filimada ku filan 1080 HD.
Ikhtiyaarrada laga beddeli karo ee filimada loo kala soocayo iyadoo loo eegayo xulashada isticmaalaha.
Hadaad rabto waxaad ka iibsan kartaa oo aad ka kireysan kartaa filimada Vudu.
Xayeysiisyada dhammaan filimada.
Dhammaan filimada bilaash uma ahan inaad aragto, filimada qaar waxay ubaahanyihiin rukumo.
Gelitaanka iyo Isqorista ayaa lagama maarmaan ah.
7. Kanaalka Roku
Kanaalka Roku sidoo kale waa adeeg bixiye daawashada filimada qadka tooska ah uga socda. Waxaad si fudud ugu rakibi kartaa Roku Channel taleefankaaga casriga ah oo aad ku raaxeysan kartaa daawashada filimada bilaashka ah ee raaxadaada iyo fudaydkaaga ugu sarreeya. Roku Channel wuxuu u oggolaanayaa shineemo sidaada oo kale inaad hesho fursado fara badan oo loogu talagalay daawashada shineemooyinka cajiibka ah sida kuwa ugu wanaagsan TV-ga Ingiriiska, dhacdooyinka ugu sarreeya ee Netflix, iyo filimada Oscar-magacaabay.
Haa, waa lama huraan inaynu xusno inay jiraan carqaladeyn ganacsi oo udhaxeysa filimada laakiin waxaa la heli karaa 10 ilbidhiqsi iyadoo la tirinayo.
Filimada waxaa loo kala sooci karaa loona habeyn karaa qaabab fara badan.
Bandhigyo TV ayaa la heli karaa.
Isticmaalayaashu waxay u habeyn karaan interface-ka isticmaalaha markay doonayaan.
Qoraallo la heli karo
Subtitles ayaa loo heli karaa luqado kala duwan.
Xayeysiinta ganacsiga waxaa ka mid ahaa.
La heli karo oo kaliya daawadayaasha Mareykanka.
Looma heli karo taleefannada gacanta.
Xisaab isticmaale ayaa loo baahan yahay.
Qaar Ka Mid Ah Goobaha Waadinta ee Filim Ka Qiimo Badan (Mushahar & Bilaash)
CBS Dhamaan Helitaanka
Waqti Bandhig Meel Kasta
Zee5 (Gudaha Hindiya)
1movies & Inbadan Oo Badan ..!
Filimada aad ka daawan karto Roku TV: Memento, highlander, yaa badbaadiyey Kirismaska, Hugo, saddexagalka, Ogosto Rush, iyo qaar kaloo badan. Isku soo wada duub, Guys .. !! Haddii aad dhibaato ku qabtid helitaanka filimka aad jeceshahay oo bilaash ah waxaad dooran kartaa DVD-yada bilaashka ah ee kirada oo ka kooban dhammaan filimaanta cusub iyo kuwii ugu dambeeyay ee laga soo qaatay sanduuqa Red.
Ma ku faraxsanahay inaan arko Megan Fox Saqda dhexe ee Switchgrass?
google chromecast ee pc windows 10
shabakadaha qabow marka aad caajiso
websaytyada filimada bilaashka ah ee ugu fiican adigoon is qorin
qulquli filimada bilaashka ah ee internetka
dhammaan kor u kaca roblox id